URegina Daniels Wamkela iNkwenkwe yeNkwenkwe-Iindaba zaseNigeria kunye neeNdaba zeHlabathi
Ru-egina Daniels kunye no-Ned Nwoko bamkelekile umntwana oyinkwenkwe, inkundla yase-US yabetha umthetho wokunciphisa isisu, iManchester United ukujongana neChelsea kumdlalo we-semi-fainali yendebe. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. URegina Daniels wamkela inkwenkwana nge-hubby Ned Nwoko
Iifoto zokukhulelwa zikaRegina Daniels
Umlingisi weNollywood, Regina Daniels wamkele umntwana oyinkwenkwe nendoda yakhe, Ned nwoko. Iindaba zokufika kukaRegina Daniels 'womntwana oyinkwenkwe kwabelwane ngazo nge-Instagram ngoMvulo, ngoJuni 29, 2020, ngumzakwabo we-movie.
“Ngokwasemthethweni malume uyazi? Halala idayimane yam. Yinkwenkwe yomntwana oyinkwenkwe. Iyanu ti sele @ regina.daniels @ regina.daniels Gods the great ” wabhala.
Sivuyisana noRegina Daniels kunye ne-hubby yakhe, uNederoko ngokufika komntwana wabo.
Iipesenti ezingama-2 kubantu abagula ngokugula kakhulu babuyela kwi-COVID-83
Bangama-44 kubantu abangama-53 abosulelwe yi-COVID-19 nababegula kakhulu eGhana.
Inani, ngokuka Mongameli Nana Akufo-Addo, ibonisa ukuba iipesenti ezingama-83 zabantu abosulelekileyo, kwii-IntUo zoNyango oluKhethekileyo (i-ICU) kumaziko ezempilo elizweni, akhutshiwe.
3. UMzantsi Afrika: Urhulumente waseGauteng uthathela ingqalelo indawo ekunzima ukuyivala
Umphathiswa Wezempilo eGauteng, Bandile Masuku, uvakalise ukuba isebe lakhe likuthathela ingqalelo imeko yokuba liphondo lingabuyi kwindlela yokuzivalela emva kwe-COVID-19 amatyala avele kwiveki ephelileyo.
Baphantse baba ngama-37,000 abantu abosulelekileyo eGauteng ukuza kuthi ga ngoku, ngaphezulu kwezi-10,000 zabaguli ababhalisiweyo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Iqondo lokuhanjiswa lisonyukile, kubeka abasemagunyeni kwisilumkiso esikhulu.
4. Inkundla ephezulu yase-US ibethe umthetho ophelisa izisu
Abantu ababhikica ngokuchasene nokuqhomfa babonwa ngaphandle kweNkundla ePhakamileyo
INkundla ePhakamileyo yase-US igqibe kwelokuba umthetho othintela isisu e-Louisiana awunakuphikiswa kwisigqibo esibalulekileyo. Umthetho wawunyanzelisa ukuba ogqirha abanikezela ngokukhupha isisu bavume amalungelo kwizibhedlele ezikufutshane, ezathi iijaji zakhokelela kumthwalo ongafanelekanga kubafazi.
Ijaji eyiNtloko UJohn Roberts ujoyine abagwebi benkululeko kwisigqibo se-5-4 kwityhefu kumaqela anokulwa nesisu. Inkundla yaxabela umgaqo-nkqubo ofanayo eTexas ngo-2016, umbono waphawula.
Le yityala lokuqala elikhulu lokukhupha isisu elivela kwiNkundla ePhakamileyo ngexesha lobumongameli bukaTrump.
5. IManchester United ukujongana neChelsea kumdlalo wokugqibela weNdebe ye-FA
IManchester United izakujongana neChelsea kunye neArsenal izakudlala iManchester City kumdlalo wokugqibela weNdebe ye-FA. Umzobo ubonakalisa ezintathu zeNdebe yomine yeempumelelo, kunye neArsenal irekhodi abaphumeleleyo ngexesha le-13.
I-United, ebetha uNorwich ukufikelela kumanqaku amane okugqibela, iphumelele kangangezihlandlo ezili-12, ngelixa i-Chelsea, eyakha yadlula kwiLeicester kwikota-fainali, iphumelele isibhozo. Omabini la manyathelo aza kudlalwa eWembley kwimpelaveki kaJulayi 18 no-19. Umjikelo wokugqibela ucwangciselwe uMgqibelo, Agasti 1 kwindawo enye.
Bona kwakho: Isaziso sokukhulelwa kukaRegina Daniels